Zimbabwe Archives - Page 2 of 2 - Jewellery Business Zimbabwe Archives - Page 2 of 2 - Jewellery Business
Activist free to go, says Zimbabwean court
A Zimbabwean court has dropped all charges against human rights activist Farai Maguwu, who was accused of providing false and prejudicial information against the state in connection with the Marange diamond fields.
More diamonds discovered in Zimbabwe, says minister
The Zimbabwe government is reporting the discovery of three large diamond deposits.
Kimberley Process approves export of Zimbabwe diamonds
Zimbabwe has been given the go-ahead by the Kimberley Process (KP) to carry out two supervised limited exports of rough diamonds from its controversial Marange field.
Arrest of Zimbabwe NGO director sparks outrage
Industry groups are denouncing the arrest of a director of a Zimbabwean non-governmental organization (NGO).
KP appoints monitor to Zimbabwe
The Kimberley Process (KP) has appointed a monitor to liaise with the Zimbabwe government to ensure compliance with the certification scheme on exported diamonds.
Human rights group calls for ban on Zimbabwe diamonds
Human Rights Watch (HRW) is urging the global jewellery industry to not source diamonds originating from Zimbabwe.
CJA calls for suspension of Zimbabwe from Kimberley Process
The Canadian Jewellers Association (CJA) says the decision to not suspend Zimbabwe from the Kimberley Process is “unacceptable.”
WFDB asks KP to release Zimbabwe report
The World Federation of Diamond Bourses (WFDB) is calling on the Kimberley Process (KP) to release its report and recommendations on Zimbabwe following a visit last month by a team to a diamond field under military control.
World Diamond Council calling for action on Zimbabwe
The World Diamond Council (WDC) says it will recommend suspending Zimbabwe from the Kimberley Process (KP) if the Marange diamond fields are not demilitarized.